-Achọ otú dee a Letter na nchịkọta akụkọ pụta ìhè n'okporo ámá na okporo ụzọ nsogbu enwe mmiri na-egbu osisi n'oge udu mmiri? Lee, anyị bụ na a Letter na nchịkọta akụkọ banyere mmiri na-egbu osisi nsogbu n'oge udu mmiri na Metro obodo ndị dị ka Delhi.
isiokwu- Pụta ìhè banyere mmiri na-egbu osisi nsogbu na Delhi n'oge udu mmiri
Site na gị kpọrọ akwụkwọ akụkọ m na-achọ ịdọta uche nke nchegbu ọchịchị nsogbu nke mmiri na-egbu osisi na Delhi n'oge ọ bụla udu mmiri.
Ọ bụ a bit iberibe ịhụ akụkụ nke ọtụtụ n'okporo ámá na okporo ụzọ na Delhi na-mmiri nke dị mgbe a awa ole na ole nke intermittent mmiri ozuzo a ụbọchị ole na ole gara aga. Nke a na-egosi na a nsogbu bụ isi drainage usoro n'obodo. Delhi na-akawanye mmiri ozuzo dị ka nke a nanị maka izu ole na ole a afọ n'oge ọ bụla ọnwa. Ma ọbụna mgbe ahụ obodo ike ịnagide ya. Ọnọdụ ahụ karịsịa ọjọọ n'okporo ụzọ n'okpuru ụfọdụ flyovers. Ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala hapụrụ ụgbọala ha mgbe a tọrọ atọ na mmiri ọdọ mmiri. Waterlogging na-ezo aka saturation nke ala na mmiri. Mgbe ọhụrụ okporo ụzọ na-na-ewu, karịsịa na ala-dina ebe, ọ dị mkpa ka a kwesịrị ekwesị drainage usoro a na-etinye n'ime ebe nke mere na mmiri na-ngwa ngwa drained bụrụ na nke mmiri ozuzo. Dị ka ndị a bụ isi obodo India, ọ bụ incongruous ịhụ idei mmiri ụzọ mgbe a ọgwụ nke mmiri ozuzo.
Kwa afọ, oké mmiri ozuzo ka akụkụ ụfọdụ nke obodo na-ata ahụhụ site na waterlogging. The mmiri ozuzo akụrụngwa, ma ọ bụrụ na ọ dị adị na niile, bụ zuru ezu na-ekwe nkwa drainage nke mmiri nke mere na n'okporo ámá na ala-dina ebe ina rikpuru. Roads na-egbochi na-eduga mgbochi okporo ụzọ, pedestrians nwere Wade site idei mmiri n'okporo ámá na-karịsịa ogbenye bi n'obodo ukwu, bi ná mkpakara ụlọ ma ọ bụ ụlọ mkpakara nwere n'ebe obibi ha mgbe mebiri site na mmiri, nke nwere ike iwe ọtụtụ ụbọchị ya laa azụ. Ma waterlogging eme n'ebe nile, ma ọgaranya ma ọ bụ na ogbenye agbata. Kwa afọ akwụkwọ akụkọ si weather akụkọ banyere kpọmkwem ụbọchị mgbe mmiri na-atụ anya na-amalite na ma udu mmiri emewo ka ọzọ ma ọ bụ obere mmiri ozuzo karịa na afọ tupu n'agbanyeghị na nchegbu ndị ọchịchị emeghị jikwaa ọnọdụ.
Anyị MCD nwere ezu ego ha na-jikwaa ọnọdụ, ma na-ekwesịghị ekwesị mkpofu dumping site ọha na eze na ọdịda nke MCD bụ otu n'ime isi ihe mere maka sewers ịlụ kpagbuo na mkpofu nke njọ mmiri na-egbu osisi. N'ihi na nke waterlogging ndị mmadụ nwere na ihu nza nke nsogbu dị ka ihe mberede okporo ụzọ ọbụna na-akpata ọnwụ mgbe ụfọdụ, mgbochi okporo ụzọ, dịkwuo anwụnta na na. Anyị nwere olileanya na Public Works Authority ga-mmiri osisi nsogbu kpọrọ na ịmụta ọhụrụ omume na nke jikoro iji gbochie ụdị nsogbu na-eme n'ọdịnihu.
« Top 8 Ọrụ Nhọrọ na ọrụ na-enye ụgwọ ọnwa na India
World AIDS Day – December 1, 2017 : edemede, isiokwu, slogans, Quotes, ozi, Olee otú Agba, Speech »